एलबी थापा - | Nagarik News - Nepal Republic Media
एलबी थापाका लेखहरु :
टाढिएका बाम प्यूठानमा नजिकिँदै
केन्द्रमा पार्टी एकिकरणको चर्चासँगै चुनावी तालमेलमा होमिएका दलहरु एक आपसमा पुराना कुरा बिर्सिएर नजिक हुन थालेका छन्। एक अर्कालाई सत्तोसराप गर्ने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता यतिबेला सम्बन्ध सुधारमा जुटेका हुन्।
एलबी थापा ९ कार्तिक २०७४ बिहीबार ९ मिनेट पाठ
प्यूठान नगरपालिकामा माओवादी विजयी
प्यूठान नगरपालिमाका जारी मतगणनामा माओवादी केन्द्रले जितेको छ। नगरपालिकामा मेयर पद जितेर माओवादी केन्द्रले जिल्लामा खाता खोलेको हो। माओवादीले राजमोसँगको तालमेलमा जिल्लाको केन्द्र मानिने प्यूठान नगरपालिमा जित हात पारेको हो।
एलबी थापा २० असार २०७४ मंगलबार ३ मिनेट पाठ
प्यूठानमा पहिरोले १ बेपत्ता २ को उद्वार
प्यूठानमा गएराति गएको पहिरोले १ जना बेपत्ता भएका छन भने २ जनाको उद्वार गरीएको छ। गौमुखी गाउँपालीका ३ मा पहिरोले पुरीएर १६ बर्षिय तुलसा घर्ति बेपत्ता भएकी छन्। शुक्रबार राती आएको आएको अविरल वर्षा सहितको पहिरोले स्थानीय शेर बहादुर घर्तिको घर पुरीएर उनको छोरी बेपत्ता भएकी हुन्।
एलबी थापा १८ असार २०७४ आइतबार १ मिनेट पाठ
प्यूठानमा एमाले कांग्रेस बराबर
दोस्रो चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को नतिजा आइरहेका छन्। नौं स्थानीय तह भएको प्यूठानमा ८ वटा तहको नतिजा सार्वजनिक भइसेकेको छ। सार्वजनिक मतगणनाको नतिजा अनुसार एमाले प्रमुख ३ र उपप्रमुख २ स्थानमा बिजयी भएको छ।
एलबी थापा १८ असार २०७४ आइतबार २ मिनेट पाठ
मल्लरानी गाउँपालिकामा जनमोर्चा बिजयी
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को मतगणना जारी रहँदा प्यूठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पकड जमाएको छ। यो गाउँपालिकामा जनमोर्चाका तर्फबाट अध्यक्ष पदमा अमरध्वज राना र उपाध्यक्ष पदमा सरीता जिसी बिजयी भएकी छिन्।
एलबी थापा १६ असार २०७४ शुक्रबार १ मिनेट पाठ
प्रहरी हिरासतमा रहस्यमय रुपमा एक ब्यक्तिको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर भिंगृमा स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। बिहीवार राती स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं. ५ सारी निवासी भुपेन्द्र गिरी इलाका प्रहरी कार्यालय भिंगृको शौचालयमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए।
एलबी थापा २९ वैशाख २०७४ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
म्यादी प्रहरीले गाउँलेलाई कुटे
मदिरा सेवन गरी लठ्ठिएका म्यादी प्रहरीले गाउँलेहरुलाई कुटपिट गरेका छन्। गौमुखी गाउँपालिकास्थित खुङमा रातीको समयमा सुतीरहेका स्थानीयलाई उनीहरुले कुटपिट गरेका हुन्। शनिबार राति भएको घटना भने प्रहरीले बाहिर ल्याएको छैन।
एलबी थापा २५ वैशाख २०७४ सोमबार ३ मिनेट पाठ
प्यूठानमा स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि आएको जिप दुर्घटना हुँदा ६ जनाको ज्यान गएको छ। स्वर्गद्वारी नगरपालिका-४, रुमालेमा शुक्रबार बिहान जिप दुर्घटना हुँदा अन्य ३ जना घाइते भएका छन्।
एलबी थापा ११ चैत्र २०७३ शुक्रबार १ मिनेट पाठ
वर्तमान सरकार निर्वाचन नगर्ने पक्षमा रहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आरोप लगाएका छन्। विद्यालयस्तरीय आठौं राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिताको शुक्रबार प्यूठानको बिजुवारमा उद्घाटन गर्दै नेता गौतमले तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
एलबी थापा २८ माघ २०७३ शुक्रबार १ मिनेट पाठ
प्युठानमा नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
संविधान संशोधनमार्फत सीमांकन हेरफेर गर्न गरिएको प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलित जिल्लावासीले थप संघर्षका कार्यक्रम तय गरेका छन्। संघर्ष समिति गठन गरेर अखण्ड पाँच नं. प्रदेशको माग गर्दै आएका जिल्लावासीले नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्।
एलबी थापा २५ मंसिर २०७३ शनिबार १ मिनेट पाठ
आश्रम चल्छ भेटीले
पश्चिम नेपालको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय धार्मिक तीर्थस्थल प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रम भेटीकै भरमा चलिरहेको छ। आश्रमको स्वामित्वमा विभिन्न ठाउँमा रहेका गुठी जग्गा उपभोग गर्न नपाउँदा नियमित आश्रम सञ्चालनमा समस्या छ।
एलबी थापा २५ मंसिर २०७३ शनिबार ५ मिनेट पाठ
सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावको विरोधमा बुधवार जिल्ला बन्द गरिएपछि बिहीबार प्युठान र रोल्पाले संयुक्त बिरोध कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। संविधान संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव गरेसँगै यी दुई जिल्लाका बासिन्दा सडकमा उत्रिएका हुन्।
एलबी थापा १६ मंसिर २०७३ बिहीबार ४ मिनेट पाठ
संशोधन विधेयकविरुद्ध प्युठान र रोल्पाको संयुक्त आन्दोलन
सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावको विरोधमा बुधवार जिल्ला बन्द गरीएपछि बिहिवार प्युठान र रोल्पाले संयुक्त बिरोध कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। संविधान संशोधन सिमा प्रस्ताव दर्ता गर्दागरेसँगै यी दुई जिल्लाका बासिन्दा सडकमा उत्रिएका हुन्।
एलबी थापा १५ मंसिर २०७३ बुधबार ४ मिनेट पाठ
सीमाकंन हेरफेरको बिरोधमा प्युठान बन्द, बिरोध प्रदर्शन
पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्युठानबासी आन्दोलित भएका छन्। हालको पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभ्ने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको निर्णय बिरुद्ध जिल्ला बन्दको आह्वान गरिएको छ। बुधवार बिहानैदेखि जिल्लाका चोक चोकमा टायर बालेर बिरोध सभा र सरकारको संशोधन विधेयक बिरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ।
एलबी थापा १५ मंसिर २०७३ बुधबार ३ मिनेट पाठ
सरकारबाट पूर्वघोषित संघीय प्रदेशअनुसार सिमांकन कायम हुनुपर्ने माग गर्दै प्युठानवासी आन्दोलित भएका छन्। पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरू छुट्टयाउने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध बुधबार जिल्लामा दलहरूले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
एलबी थापा ९ मंसिर २०७३ बिहीबार ३ मिनेट पाठ
एलबी थापाका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्